ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး WHO ကို ထရမ့်က ရာဇသံပေး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
19 พ.ค. 2563 - 22:10 น.
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကိုဗစ် - ၁၉ အရေး ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်က မကျေနပ်တဲ့အတွက် သူတို့ရန်ပုံငွေ ထည့်တာတွေ အပြီးရပ်စဲမယ့် အထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်စာတစောင်ကို အဲဒီ အဖွဲ့အကြီးအကဲဆီကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
စာထဲမှာ ရက် ၃၀ အချိန် သတ်မှတ်ချက်ကိုရေးထားပြီး WHO အနေနဲ့ အဲဒီကာလအတွင်း "သိသာတဲ့တိုးတက်မှု လုပ်ပြမလား" (ဒါမှမဟုတ်) ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကို အဆုံးရှုံးခံမလား ဆိုတာတွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
WHO အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ တက်ဒရို ဆန်ဒါနွမ် ဂက်ဘရီရက်စ်ဆုကို လိပ်မူထားတဲ့ အဲဒီစာထဲမှာ ဒီဇင်ဘာလကစပြီး အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံ အဆင့်တွေအလိုက် ဝေဖန်ထားပါတယ်။
တနင်္လာနေ့တုန်းကလည်း မစ္စတာထရမ့်က WHO ဟာ "တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရုပ်သေး" လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနှစ်ထဲ ရွေးကောက်ပွဲရှိနေပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံတွင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ သမ္မတက တရုတ်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပျံ့နှံ့စဉ်က သတင်းမပို့ဘဲ ဖုံးဖိထားခဲ့တယ်လို့ အပြစ်ပုံပြီး WHO ကလည်း တရုတ် အဲဒီလို လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကို ဘာမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာ မရှိခဲ့ဘူးလို့ စွပ်စွဲပါတယ်။
အဲဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို တရုတ်က ထပ်ခါထပ်ခါ ငြင်းထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မစ္စတာထရမ့်ဟာ အများပြည်သူကို တလွဲတွေ ထင်ကုန်အောင်လုပ်နေတယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အသရေဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ ၄.၈ သန်းရှိနေပြီး အမေရိကန်မှာ ၁.၅ သန်းကျော် ရှိပါတယ်၊ အဲဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူပေါင်း အမေရိကန်မှာ ၉၀,၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ ဒေသအချိန် ညဘက်ပိုင်းမှာ မစ္စတာထရမ့်က အဲဒီစာကို သူ့တွစ်တာမှာ တင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာ WHO ကို အမေရိကန်က ဝေဖန်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပါ။
ဝူဟန်မှာ အာခေါင်တို့ဖတ်စ ယူနေပုံ
ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာ အမေရိကန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အလက်စ် အေဇာက WHOဟာ ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါပြန့်ပွားတာကို လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် "ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ထိ" ဖြစ်စေခဲ့ကာ "လူပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတက ဒေါက်တာ တက်ဒရိုကို ပေးတဲ့စာထဲမှာ WHO ဟာ တရုတ်နဲ့ "လွတ်ကင်းစွာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံမြည်နေပြီ" လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလအစပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အဲဒီထက်စောတဲ့အချိန်မှာ ဝူဟန်မြို့ထဲ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပျံ့နှံ့နေပြီဆိုတဲ့ အရေးကြီးလှတဲ့ သတင်းတွေကို ကုလသမဂ္ဂက အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ တောက်လျှောက် လစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲတာကို သူထောက်ပြထားတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။
စာထဲမှာ တခြားပါတာတွေကတော့ -
• သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ဖိအားကြောင့် WHO အနေနဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာဖို့ အရေးကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို ကိုးကား ထုတ်နုတ်ထားပါတယ်။
• တရုတ်က သတင်းတွေအမှောင်ချတယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ထွက်နေချိန်မှာ WHO က တရုတ်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ်လို့ ချီးကျူးနေတာကို ဝေဖန်ထားပါတယ်။
• ဗိုင်းရပ်စ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားခံရတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ တရုတ်မှာ ထွက်နေချိန်မှာ WHO ဟာ ဒီအပေါ်မှတ်ချက်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
• ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဆားစ် ရောဂါပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားစဉ်က ဒေါက်တာ ဟာလန် ဘရန့်လန်း လိုမျိုးသာ ဒေါက်တာ တက်ဒရို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် အသက်အများအပြားကို သူ ကယ်နိုင်မှာလို့ ရေးတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
WHO နဲ့ ဒေါက်တာ တက်ဒရိုရဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းအမှားတွေကြောင့် ကမ္ဘာက ပေးဆပ်မှု အများအပြားကို ပေးခဲ့ရပြီလို့လည်း စာနိဂုံးပိုင်းမှာ မစ္စတာထရမ့်က စွပ်စွဲရေးသားထားပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တာ အာရုံထွေပြားအောင်လုပ်တာလို့ တရုတ်ပြော
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်မှာသာ WHOအနေနဲ့ ရှေ့မှာ ခရီးဆက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း စာထဲမှာ သူကရေးပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတာ အတိအကျသေချာ ရှင်းမထားပေမယ့် စာထဲမှာ မစ္စတာထရမ့်က ရက်ပေါင်း ၃၀ ရက်အတွင်း WHOဟာ "အဓိကကျပြီး သိသာတဲ့တိုးတက်မှုတွေ" ကို လုပ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အဲဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေကို မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ သူယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေဟာ ရာသက်ပန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အနေနဲ့ WHO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်နေဖို့ဆိုတာကိုလည်း ပြန်သုံးသပ်သွားမယ်လို့ သမ္မတက ဆိုပါတယ်။
အရင်လတုန်းက သမ္မတထရမ့်ဟာ သူတို့ ပုံမှန်ထည့်ဝင်နေတဲ့ WHO အတွက် ရန်ပုံငွေတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဟာ ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေထဲ အများဆုံး ထည့်ဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မနှစ်က ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ WHO ရန်ပုံငွေအားလုံးရဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ထည့်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့မှာအပြီးသတ်မယ့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံ ၂ရက်တာအတွင်းမှာ WHO ရဲ့ အလုပ်တွေကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ပြန်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရက် ၃၀ အတွင်း တိုးတက်မှု ပြဖို့ တောင်းဆို
ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီညီလာခံမှာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် ပြန်သုံးသပ်ခဲ့တာတွေ ရှိသလို၊ ကမ္ဘာ့ကပ်အရေးကို အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ဆေးကုမ္ပဏီတွေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး (သို့မဟုတ်) ကုသဆေးကို ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ခွင့်၊ ရယူနိုင်ခွင့်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုလည်း ဒီညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ကတော့ သမ္မတ ရှီက တရုတ်မှာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမဆို တကမ္ဘာလုံးက အများပြည်သူသုံး ဖြစ်စေရမယ်လို့ အာမခံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ထည့်မယ့် စကားလုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ကတော့ လူသိရှင်ကြား ဝေးဝေးနေဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ Financial Times သတင်းစာကရေးပါတယ်။ ဘယ်သို့ဖြစ်စေ အမေရိကန် ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမှာပါ။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေး ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး WHO ကို ထရမ့်က ရာဇသံပေး